မှတ်စု နှင့် ကဗျာ
ဘုရားရှိခိုးခြင်းသည် စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်သူအချို့ ရှိကြလေသည်။ အမှန်စင်စစ် ယင်းထက် အဓိပ္ပါယ်များစွာ ကျယ်ဝန်းသည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ရန် နည်းလမ်းမှာ - ရတနာသုံးပါးအပေါ် ယုံကြည်မှုထက်သန်သော သဒ္ဒါ၊ စင်ကျယ်သော သီလ၊ တည်ငြိမ်သော သမာဓိ၊ မပြန့်လွင့်သော သတိ၊ သစ္စါလေးပါးနှင့် မြတ်တရားအကျိုး အကြောင်းတို့ကို သိမြင်သော ပညာ စသည့် ဗိုလ် အင်္ဂ...See More
ကိုယ်နဲ့သူများ သနားဘယ်ဟာ ၊
ချစ်လူမိုက် ဂွတ်စိုက် ပါယ်လေးရွာ။
" သဒေါသံဝါ စိတ္တံ၊ သဒေါသံ စိတ္တန္တိ ပဇာနာတိ " တဲ့ ။ " ဒေါသနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကို ဒေါသနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ် ဟူ၍ သိ၏" တဲ့ ။ ဒီထက်ရိုးအောင်၊ ရှင်းအောင်ပြောရရင် " ဒေါသစိတ်ကို ဒေါသစိတ်ဟူ၍သိ၏" တဲ့ ။ ဒေါသစိတ်ကို လို့ ဆိုကတည်းက ငါ့ဒေါသလို့ မဆိုလိုဘူးနော်- ငါမဟုတ်ဘူး။
ဒေါသကို ကြည့်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို များများလုပ်လာလို့ရှိရင် တစ်ခါတစ်လေ ဒေါသစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးပေါ်လာတာနဲ့ ချက်ချင်း မြင်လိုက်တဲ့အခါ ၊ ကိုယ်က မဖန်တီးဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာပါလားဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ် ။ အလိုမကျတာနဲ့ တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဗြုန်းခနဲဒေါသစိတ်ကလေးတစ်ခု ပေါ်လာတယ် ။အဲဒီလို မြင်လိုက်တဲ့အခါ ဒီဒေါသဟာ ငါ မဟုတ်ပါလားဆိုတာ ပိုရှင်းတယ် ။ ငါမဟုတ်တဲ့ ဒေါသကို မြင်လိုက်တယ် ။ ဒေါသနဲ့ ငါ နဲ့ တခြားစီဖြစ်သွားရင် ဒီဒေါသကို ကိုင်တွယ်ရတာ ၊ အင်မတန် လွယ်သွားတယ် ။ဒါကို သဘောပေါက်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတယ် ။
Posted by ဦးသုမင်္ဂလ(ပဲခူး) at 8:51 AM
( 12 )လရာသီဖွား၏အချစ်
M T MGTHANT. ME
နမော ဗုဒ္ဒါယ သိဒ္ဒံ
အရှင်ရာဇိန္ဒ ( ရဝေနွယ်-အင်းမ )
ကိုဇော်မင်းထွန်း (အမရပူရ) လမ်းညွန့်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းတိုင်း သိသင့် သိထိုက်သော အရာများ
ဓမ္မ ပဒ ဗာလ၀ဂ္ဂ
ပုပ္ဖ ၀ဂ္ဂ ဓမ္မ ပဒ
ဓမ္မ ပဒ စိတ္တ ၀ဂ္ဂ 3
ဓမ္မ ပဒ အပ္ပမာဝဂ္ဂ 2
ဓမ္မ ပဒ ယမက၀ဂ္ဂ
ဆန်နီနေမင်း ခက်လှပါလား သံယောဇဉ်
ဗုဒ္ဓ နှင့် လူ့အခွင့်ရေး 2
ဗုဒ္ဓ နှင့် လူ့ အခွင့်ရေး 1
7 ဒေနယူး ဂျာနယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ မတွေ့ဖြစ်ကြတာလည်း အတော်ကြာသွားကြပြီနော်. ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်တွေများနေနေ ဘလော့ဂ်လောကကြီးနဲ့ မကင်းကွာနိုင်သေးပါဘူး. တစ်လတစ်ပုဒ်လောက်တော့ တင်ကောင်းနိုင်ရဲ့လို့လေ… ဟတ်ဟတ်.
http://www.enterfactory.com/promo_w52299.html. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.